Haingo an-trano ao an-trano - Ny hevitra tsara indrindra ankafizinao | Bezzia
Susana godoy | 22/07/2021 14:00 | Nohavaozina amin'ny 22/07/2021 14:02 | Decor
Manambady ve ianao nefa te hanao izany amin'ny fomba akaiky kokoa? Avy eo ianao dia afaka manao a haingon-trano fampakaram-bady izay azo antoka fa iray amin'ireo hevitra tsara indrindra. Satria ho tontolo iainanao izany, azonao atao ny mankafy ny hevitrao tsara indrindra ary koa, manangona vola be, izay vaovao tsara foana.
Fa satria mora vidy kokoa dia tsy mila mankaleo kokoa, lavitra azy. Ao an-trano ihany koa dia afaka miloka amin'ny a fampakaram-bady nofinofy, mila miloka fotsiny amin'ny hevitra famoronana sasany ianao. Azonao antoka fa hahatonga ny andronao ho iray amin'ny andro manokana indrindra amin'ny fiainanao manontolo, araka ny tokony ho izy.
1 Famolavolana voninkazo haingon-trano ao an-trano
2 Ny seza sy ny haingon'izy ireo
3 Aza hadinoina mihitsy ny sary!
4 Bara hazo
5 Miloka amin'ny fomba voajanahary sy rustique indrindra
6 Kitapo hazavana mba hanazavana ny fotoana lehibe anananao
Famolavolana voninkazo haingon-trano ao an-trano
Tsy misy isalasalana, ny fikarakarana voninkazo dia iray amin'ireo antsipiriany lehibe indrindra mila manaingo ny mariazinay isika. Noho izany, andramo fa eo am-baravaran'ny zaridaina na amin'ny toerana hanaovana ilay lanonana, dia ataovy izay handaminana voninkazo amin'ny lafiny roa, eo amin'ny latabatra ary afaka handravaka ireo faritra manda aza ianao. Mazava ho azy, andramo hatrany ny manambatra ny loko sy ny voninkazo tianao indrindra. Ny tononkira pastel no ho be indrindra amin'izany rehetra izany, satria tsy mameno ny tontolo iainana izy ireo.
Ny seza sy ny haingon'izy ireo
Ho an'ny fotoana anaovana ny lanonana dia tsy misy na inona na inona toy ny miaraka aminy amin'ny haingon-trano tsara tarehy ao amin'izy ireo. Azonao atao ny manarona lamba azy ireo mandritra ny fankalazana ny fampakaram-bady. Saingy azonao atao ihany koa ny miloka amin'ny fametrahana seza tsy misy fonony fa miaraka amin'ny antsipiriany. Ny tiako holazaina dia azonao atao handravahana sary na balaonina, toy ny seza fanasana. Mazava ho azy, ny sezan'ny ampakarina sy ny mpampakatra dia azo ampifanarahana amin'ny taratasy. Tsy mety ve izany?
Aza hadinoina mihitsy ny sary!
Ny sary dia mihaingo mandrakariva ary mampanakaiky antsika ireo fahatsiarovana tsy azo foanana. Azonao atao ny misafidy ny mametraka iray eo afovoan'ny latabatra tsirairay, eo akaikin'ny vahininao. Raha manana fitadidiana tsy manam-paharoa ianao dia tsara kokoa ny mametraka azy eo akaikin'ny voninkazo eo ambony latabatra. Azo antoka fa hitsiky izy ireo rehefa tonga izy ireo ary mipetraka. Raha misy hazo eo akaiky eo, dia azonao atao koa ny manisy tady manify manodidina azy ary manantona ireo sary nofidinao.
Amin'ny hazo dia afaka manao izay tiantsika rehetra isika. Satria momba ny cmifidy bara iray ahafahan'ny vahiny manompo ny zava-pisotro tiany. Azonao atao ihany koa ny mametraka latabatra, miaraka amin'ny valiny iray ihany, miaraka amin'ny canapés na bar an'ny tsindrin-tsakafo. Izy ireo dia hevitra izay tafiditra ao anatin'ny haingon-trano ihany koa satria ny vahiny tsirairay avy dia hankafy tontolo iray tany am-boalohany tsy mbola nisy toy izany ary afaka manana an'io zoro io mba hanompoany ny tenany araka izay tiany. Amin'ny fampakaram-bady any an-trano dia afaka manakarama serivisy fanaovana fikarakarana na mametraka fomba buffet maimaimpoana izahay.
Miloka amin'ny fomba voajanahary sy rustique indrindra
Raha efa manana ny hevitra momba ny fomba tianao handravahana ny fampakaram-badinao ianao saingy tsy manana ilay fomba ianao, dia holazainay aminao fa ny fahatongavana any ambanivohitra dia ilay mandray ny loka voalohany. Izy io dia noho ny voajanahary ary satria manana ny singa amin'ny natiora toy ny voninkazo an-tsaha, aloky ny volontany, tady ary na dia ny dantelina izay miaraka amin'ny fikolokoloana izay tena tianay tokoa. Noho izany, ny loko beige na fasika ary koa ny fotsy dia voafidy foana amin'ny tranga toy izao. Araka ny efa noresahintsika teo dia afaka miloka mofomamy foana ianao satria mitambatra izy ireo mba hamoronana rivo-piainana romantika kokoa, izay no tena ilaintsika.
Kitapo hazavana mba hanazavana ny fotoana lehibe anananao
Tsy mila mieritreritra jiro lehibe ianao, satria miaraka amin'ny jiro dia efa manana mihoatra ny ampy ianao. Izany no antony anomezanao sosona vitsivitsy mitovy mikasika ny famoronana sy ny voajanahary amin'ny tontolo iainanao. Eny, marina fa afaka mametraka faritra manodidina ny zaridaina ianao izay manome hazavana ihany koa. Ahoana ny hevitrao momba ireo hevitra ireo?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Decor » Haingon-trano fampakaram-bady